Archive du 20180109
Loza teo am-piandrasam-paty 8 mianaka maty nihotsahan’ny tany
Olona miisa 8 no indray namoy ny ainy tao Ivory, ao anatin’ny kaominina Ambonivohitra Fianarantsoa, akaikin’ny gara na ny “cercle de cheminot”, ao an-toerana.
“Gouvernement de combat” Minisitra 3 ampiadiana amin-dRavalomanana
Ankoatra an’i Rivo Rakotovao filohan’ny antenimierandoholona, dia minisitra miisa 3 ao anatin’ny governemanta no mihetraketraka mafy sy mamaky ady amin’i Marc Ravalomanana dia ny minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana Harry Laurent Rahajason, ny minisitry ny indostria Tazafy Armand, ny minisitry ny jono sy ny harena an-dranomasina Gilbert François.
Vondrona G 5 Mangataka an-dRajaonarimampianina hirotsaka ho kandida
Mihetsika indray ny vondrona mpanao politika G 5 ahitana ny depiote isany Randrianasolo Jean Nicolas (Betroka), Razafimahatratra Abel (Manakara), Hanitriniaina Mamy Armand (Miandrivazo), Raherisoa Vololona Victorine ary i
Kaominin’i Miandrivazo Nofaizina noho ny hambo-po politikan’ny HVM ?
Vaky ny tohodranon’i Mahajilo, ka saika ny tanànan’i Miadrivazo manontolo no traboina amin’izao fotoana izao. Tsy manan-kaleha ny vahoaka satria hatramin’ny tranompokonolona no lasibatra. Vokatry ny tsy firaharahiana nataon’ny fanjakana foibe no mety antony iray lehibe satria ny volana ferbroary 2016 nitokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina Birao Ifoton’ny Fananan-tany (BIF) sy Toeram-pandidiana (Bloc Opératoire),
Jirama Toamasina 15 miliara ariary ny fahavoazana
Nitondra takaitra ho an’ireo distrika nandalovany i “AVA taorian’ny fidirany tao Mahavelona Foulpointe sy tao Toamasina, Brickaville ary Vatomandry.
Fanampiana avy any ivelany Vaky bantsilana ny aferan’ny fanjakana
Vaky bantsilana ny toe-javatra maneho ny zavatra tsy mangarahara sy ny afera maloton’ny fitondrana momba ny fitantanana ireny fanampiana avy any ivelany hoenti-manarina ny fahavoazan’ny firenena tamina loza voajanahary ireny.
Vidin’entana ilaina andavan’andro Raikitra ny fanararaotana
Tsy dia mbola nahitana fiakarany firy hatreto ny vidim-bary ho an’ireo mpamongady na dia nisy aza ny fahatapahan-dalana ao Toamasina sy Antsirabe izay mampiitsoka ireo fiarabe mpitatitra entana ho aty Antananarivo, raha ny hita teny Anosibe sy ny manodidina omaly.
Trano fonenana eto Madagasikara Mila fanovana goavana
Tsy ho afa-bela amin’ny rano be miakatra i Madagasikara rehefa misy ny rivodoza mahery mandalo eto ; tsy misy fomba hahafahana mifehy ny rano saingy ny azo atao kosa dia ny manatsara hatrany ny fiomanana na ara-tsaina io, na ara-pitaovana, na ara-teknika , na ara-bola amin’ny fiatrehana ny loza mety ho avy.
Kaominina Andoharanofotsy Fianakaviana 500 no ahiana hotraboina
Toy ireo kaominina sasany ao anatin’ny distrikan’Antananarivo dia efa misy traboina ihany koa amin’izao fotoana izao ao anatin’ny kaominina Andoharanofotsy.
ANS Ampefiloha Mampiantrano traboina miisa 576
Efa feno traboina sahady amin’izao etsy amin’ny ANS Ampefiloha. Miisa 576 avy amina fianakaviana miisa 390 izy ireo hatramin’ny omaly, traboina avy ao amin’ny Fokontany Andavamamba Anjezika I.
Lalao Ravalomanana Nankahery sy nanampy ireo traboina etsy amin’ny ANS
Tonga nitondra fanampiana sy nankahery ireo tra-boina mitoby etsy amin’ny ANS Ampefiloha sy ny EPP Anosibe omaly ny ben’ny tanànan’Antananarivo sy ireo mpiara-miasa aminy.
Traboin’ny rivodoza any Manakara Ho avy ny fanampiana , hoy ny depiote Abel
Tahaka an’ireo toerana rehetra nandalovan’ny rivodoza Ava farany teo dia maro dia maro ihany koa ireo havana traboina any amin’ity distrika ity, hoy ny depiote Razafimahatratra Abel voafidy tany an-toerana.
Rugby à XV GOLD TOP 8 Nahemotra rahampitso ny andro faharoa
Noho ny fisian’ilay andro ratsy “Cyclone Ava” nandalo teto amin’ny nosy izay nitondra rivotra sy orana betsaka tsy an-kijanona teto
Antenimieran’Andrianan’Imerina Mila averina ny hasin’ny olona
Nifamory voalohany teto Antananarivo tamin’ity taona ity ny sabotsy teo ireo Raiamandreny ara-drazana mivondrona ao anatin’ny Antenimieran’Andrianan’i Merina (AAM).
Tompon’andraikitry ny zandary tsy nahomby Andrasana ny fanapahan-kevitry ny SEG
Notontosaina omaly tetsy amin’ny toby Ratsimandrava Andrefanambohijanahary omaly ny lanonambe fifampiarahabana nahatratra ny taona ho an’ny zandarimariam-pirenena.
Toamasina Tra-boina ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana
Ao anatin’ny lisitry ny tra-boina ihany koa taorian’ny rivo-doza “AVA” ny mpitandro ny filaminana, ahitana ny zandary sy ny miaramila ary ny polisy; isan’izany koa ny fitsarana manana sampana telo ao Toamasina.
Tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy, saingy tsikaritry ny maro hatry ny zoma teo ary hita taratra omaly ihany koa fa mitondra vohoka ny minisitry ny mponina Onitiana Realy. Nitsidika ny Akany Fianakaviana Miarina misy ireo traboina teny Isotry izy omaly ary hita fa misimisy kibo sady niha nahazo aina. Ny volana aogositra 2017 izy no nanorin-tokantrano niaraka tamin’i Briand Andrianirina, filohan’ny federasionina Malagasin’ny kick boxing teo aloha. SARY :Onitiana
Syria Olona 30 mahery matin’ny daroka baomba